Tajamuka-Sesijikile: Sesidiniwe NgoMugabe, Hlalani Ezindlini NgoLwesithathu
UMnu. Promise Mkwananzi, isikhulumeli seTajamuka-Sesijikile Campaign sivalelwe entilongweni okwemanje.
Ontanga bamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenzelana lozulu, ezikumanyano weTajamuka-Sesijikile Campaign bakhuthaza uzulu ukuba ahlale emakhaya ngolweSithathu engaze angena emadolobheni loba ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo.
Lokhu ngeminye yemizamo yokuthi uMongameli Robert Mugabe asuke embusweni njengoba uzulu esithi eseyehlulekile ukubusa.
Omunye wabontanga abakumkhankaso weTajamuka-Sesijikile, uHardlife Mudzingwa, utshele intathelizindaba eHarare ukuthi kababoni efika uMpalakazi uMongameli Mugabe elokhe esembusweni nxa kukhangelwa isimo esibi somnotho elizweni lokunye okuhluphayo.
Lokhu kusekelwe nguMnu. Tichaona Masiyambiri, omunye wabakukhomidi yokuqoqa inhlelo zalomkhankaso.
Ukhuthaze uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba aphatheke kulomkhankaso kamhlaka 31 Ncwabakazi.
Ontanga laba bathi kabethuselwa yilokho osekukhulunywa ngontanga beZanu PF kodwa bezinikele ukwenza konke okusemandleni abo ukubona inguquko uqobo isiba khona elizweni, uzulu esephila ngcono kulalokho ayikho khona.
Bathi bazoqhubeka ngemikhankaso yaloluhlobo, ngokuthula ngoba bengalufuni udlakela, uMugabe aze asuke esikhundleni, atshiyele abanye intambo zombuso.
Abomkhankaso we Tajamuka/Sesijikile sebelamaviki athile besungule umkhankaso wabo wokukhuthaza uMugabe, ukuba asuke esikhundleni kusiyafika umhlaka 31 Ncwabakazi bethi ngoba esehlulekile ukulikhokhela leli lizwe.
Kodwa okwenzakalayo kutshengisa ukuba akazihluphi ngitsho lakancane ukulandela linkuthazo enziwa ngumuntu wonke elizweni okugoqela ontanga beTajamuka/Sesijikisile.